Inani leeNkonzo zoTywala kwiBhotile yewayini - Amanqaku Ewayini
Inani leeNkonzo zoTywala kwiBhotile yewayini
Ngokwe- Amaziko kaZwelonke wezeMpilo (NIH), ukuhambisa utywala kuso nasiphi na isiselo esiyi-.6 yeencindi zamanzi okanye i-14 yeigrem zotywala obusulungekileyo, eyi-ethanol ngaphandle kokuxutywa. Ngenxa yokuba iwayini inotywala obahlukeneyo ngevolumu (ABV) yeentlobo ezahlukeneyo, kukho uluhlu lweenkonzo zotywala kwibhotile esemgangathweni eyi-750 ml.
Ukubala ngokusekwe kuTywala ngeVolumu (ABV)
Ngokubanzi, iwayini isusela kwi-5.5 yeepesenti ye-ABV yeewayini eziphantsi kakhulu zotywala ukuya kwiipesenti ezingama-20 ze-ABV zeewayini ezinqatyisiweyo. Ke, ukuba iwayini iyi-15 yeepesenti ye-ABV, kwi-750 mL, 112.5 mL isiselo esinxilisayo. Ukwenza izibalo ezithile, oku kuthetha malunga nee-ounces ezi-3.8 zebhotile yewayini sisiselo esinxilisayo, ke ibhotile eyi-750 mL ye-15% ye-ABV ine-6.333 (6 1/3) yokuhanjiswa kotywala ngokwemigangatho ebekwe yi-NIH.
yibethe i-louis vuitton iingxowa vs eyinyani
Izibonelelo kunye nokusilela kwiibhotile zewayini ezincinci
Kufuneka iwayini engakanani na ngeTshathi yoCwangciso loMntu
Iitshathi zeCarb zeendidi ezili-17 zewayini
Le theyibhile ilandelayo ikhupha isiselo esinxilisayo seABV eyahlukeneyo kwibhotile ye-750 mL kwaye ikwabala ubungakanani beebhotile. Okokugqibela, itshathi ikuxelela ukuba zingaphi ii-ounces eziza kubakho ekukhonzeni ukuze ubenako ukukhonza kuphela utywala kwewayini yale pesenti. Umyinge we-ABV weentlobo ezahlukeneyo zewayini uthathwe kuwo Ubuwula bewayini . Ilebhile yebhotile yakho yewayini iya kukuxelela i-ABV yayo.
ABV Imizekelo I-375 mL (ukwahlula okanye isiqingatha) 750 mL iinkonzo 1.5L (magnum) iinkonzo Ii-ounces zewayini ngokusebenza
5.5% ukuya kwi-7.5% UMoscato d'Asti, Brachetto d'Aqui
1.2 ukuya kwi-1.6 servings
2.3 ukuya 3.2 servings
4.6 ukuya 6.4 servings Ii-ounces eziyi-8 ukuya kwezi-11
I-8% ukuya kwi-9.5% Riesling, mhlophe Alsace, Muscadet 1.7 ukuya kwi-2 servings 3.4 ukuya 4 servings 6.8 ukuya kwi-8 6.3 ukuya kwi-7.5 ii-ounces
10% ukuya kwi-11.5% ILambrusco, iSoave, iPinot Grigio 2.1 ukuya kwi-2.4 servings I-4.2 ukuya kwi-4.8 yeenkonzo 8.4 ukuya 9.6 servings 2.6 ukuya ku-3.1 ii-ounces
Iipesenti ezili-12 ukuya kwi-13.5% IBordeaux, iBurgundy, iChampagne, iRhone Blends, iNebbiolo, iSangiovese, iRose 2.6 ukuya kwi-2.9 servings 5.1 ukuya 5.7 servings 10.2 ukuya kwi-11.4 servings I-2.2 ukuya kwi-2.5 ii-ounces
14% ukuya kwi-15% ICabernet Sauvignon, iMerlot, iPinot Noir, iChardonnay, iZinfandel, iGrenache, 2.5 ukuya 3.2 servings 5.9 ukuya 6.3 servings 11.8 ukuya kwi-12.6 yeenkonzo Ii-ounces ezi-2 ukuya kwezi-2.1
I-15.5% ukuya kwi-20% I-Shiraz, iwayini yeedessert yokuvuna kade, iwayini eqinisiweyo, ivermouth 3.3 ukuya 4.3 servings 6.6 ukuya ku-8.5 13.2 ukuya kwi-17 yeenkonzo 1.5 ukuya kwi-1.9 ii-ounces
Uya kuqaphela njengoko umxholo wotywala wewayini yakho unyuka, ubungakanani bokusebenza kwakho kwii-ounces buya kuncipha ukuze kugcinwe ii-ounces ezi-6 zotywala ngokusebenza.
Olunye ubungakanani beBhotile
Kukho ezinye, ubukhulu beebhotile eziqhelekileyo. Nangona kunjalo, ngokubanzi, ezi ziziphindaphindo zebhotile ye-750 mL. Umzekelo, i-magnum ephindwe kabini ibamba i-3L kwaye iphindaphindwe kabini inani leenkonzo ezifumaneka kwimagnum.
Ukuba uyazi i-ABV yakho, unokwenza izibalo ngokwakho. Ezinye izinto oya kuzifuna ukwenza ukubala zibandakanya:
indlela yokunyibilikisa ibhotolo ezingubeni
I-750mL ilingana nee-ounces ezingama-25.36.
Ukuphakwa kotywala zii-ounces ezi-6.
Ukubala i-ABV kwibhotile eyi-750ml
Nantsi indlela yokwenza ubalo lwebhotile yewayini eyi-750ml (standard).
(Iipesenti ezingama-25.36 x zeepesenti ze-ABV) / .6 = iinkonzo zizonke zotywala kwibhotile iphela
Ukubala Ubungakanani bokuSebenza
Ukubala ubungakanani bokusebenza, hlula ii-ounces ezingama-25.36 ngenani leenkonzo ... ke ngebhotile ye-750mL ene-5.5 yeepesenti ye-ABV, uya kwahlula i-25.36 (inani lee-ounces kwibhotile ye-750mL) nge-2.3 servings (inani leenkonzo yotywala kwibhotile yonke). Ngendlela ekhawulezayo engabandakanyi izibalo, jonga nje kwitafile yoluhlu lweenkonzo kunye nobungakanani boluhlu lwe-ABV kwibhotile yakho yewayini, kwaye uyikhuphe ibhola.
Uluhlu lweZinto ezinokwenzeka
Iwayini inoluhlu olubanzi lwe-ABV, oko kuthetha ukuba unomdla ngokungqongqo malunga nokunikezelwa kotywala, ungadla naphi na ukusuka kwi-1.5 yeewunces ukuya kwii-ounces ezili-11 kwaye unenani elifanayo lotywala. Nangona kunjalo, ngetshathi engentla, kulula ukugcina umkhondo.
Njani Tos, Projects And Rooms Isinxibo Sendoda Umdaniso Ne Performance Costumes Iiprojekthi Ukukhetha A Camera
indlela yokujongana nabantakwabo ababawayo
isampula ileta yesikhalazo eya kubaphathi
uthando lukamama ngomntwana ucaphula
Ungayicoca njani ipani yokutshisa
into yothando ukuyithetha kuye
Iindawo ezilungileyo zokuhlala eGeorgia